Court Update on 07 July 2016
Friends of Mizzima 2:44 AM No comments
Columnist Sithu Aung Myint (who is one of the defendants asawriter for the Op-Ed) applied leave today at the court saying he was out of station.
The judge re-scheduled next hearing to 21st July 2016. (As per Mizzima lawyer, the court will hear from U Man Thu Shein on that day.)
Friends of Mizzima 7:54 AM No comments
In Myanmar, the establishment of the News Media Council (NMC) as an independent co-regulatory complaints system wasamajor landmark on the road to democracy. However,arecent complaint by Eleven Media Group Chief Reporter, Mann Thu Shein, against Mizzima Editor-in-Chief and Managing Director, Soe Myint, and Mizzima Editor-in-Charge of Myanmar Edition, Myo Thant, seeks to avoid the NMC entirely and rely instead onacriminal defamation charge under section 34(d) of the Electronic Transactions Law (ETL).
“The article in question, which is about an important matter of public debate, does not contain defamatory content as that is understood under international law,” said Toby Mendel, Executive Director of CLD. “Any complaint against the article should have been lodged with the NMC, which has jurisdiction over press complaints and is clearly the more appropriate venue for this case.”
In Indonesia, defamation cases involving the media must first go through the Press Council, an approach Myanmar might wish to consider. In addition to the fact that it was not filed with the NMC, this case highlightsanumber of problems with the framework for freedom of expression in Myanmar, including the following:
• That the country still has and actively uses criminal defamation laws, despite the fact that these representabreach of the right to freedom of expression as guaranteed under international law, among other things because they provide for harsh sanctions, including imprisonment, for defamation.
• That the country has special defamation provisions, with harsh sanctions, in the ETL.
• The failure of the administration of justice authorities to weed out cases like this, which should never go to court.
CLD calls on private actors to use restraint in taking cases involving statements on matters of public concern to court and to use the NMC complaints procedure instead, on police and prosecutors to refuse to lodge criminal cases which would unduly limit freedom of expression, and on the government to repeal all criminal defamation provisions and to replace them with appropriate civil defamation laws.
Criminal case against IFEX member Mizzima News must be dismissed
Friends of Mizzima 5:13 PM No comments
The IFEX network calls on the Attorney General of Myanmar to immediately dismiss the criminal case being brought against staff of the IFEX member organisation Mizzima News in favour of dispute resolution mechanisms provided for by national law. The next hearing for the case will take place on7July 2016.
Mr. Tun Tun Oo
Attorney General of the Republic of the Union of Myanmar
IFEX, the global network of 104 organisations working to promote and defend freedom of expression worldwide, writes to you to express our objection over the criminal case being brought against several staff of the IFEX member organisation Mizzima News, including columnist Sithu Aung Myint, Mizzima Editor-in-Chief and Managing Director Soe Myint and the editor-in-charge of Mizzima's Myanmar edition, Myo Thant.
IFEX is concerned about the heavy penalty that individuals from this organisation face for an opinion column criticising rival media outlet Eleven Media's coverage ofagovernment-backed organisation involved in the peace process between the armed forces and ethnic rebel groups. The case is being tried under the Electronic Transactions Law,alaw established for the prosecution of criminal activity online. Instead, the case should be pursued according to Myanmar's News Media Law, which was created precisely for disputes such as this.
The News Media Law providesavenue for grievances to be aired and disputes mediated by the National Press Council before being referred to the courts. This allows for media groups to continue playing their role asapublic watchdog, while still providingavenue for credible complaints to be heard against them. According to Mizzima News, the National Press Council should have been the body where the complaint was first brought. Instead, police referred the case to the Minister of Transport;aministry the organisation says has little involvement in media affairs, which then approved the criminal proceedings.
This recent lawsuit against Mizzima News is part ofagovernment trend of using both newly created and repressive laws leftover from the military junta and colonial era to prosecute peaceful expression and activism, often through allegations of defamation or contempt. The penalties for such criminal charges are disproportionate to whatever reputational harm might be incurred by the aggrieved party, and are likely to lead to self-censorship on controversial issues.
If these individuals are prosecuted under the Electronic Transactions Law, it could setadangerous precedent that createsachilling effect based on the increased costs of practicing free speech, including prison time, crushing legal fees, and restrictions on travel and employment.
Accordingly, IFEX calls on the Attorney-General of Myanmar to immediately dismiss the case under the Electronic Transactions Law and recommend that it instead be adjudicated by the Myanmar Press Council under the News Media Law. Suchastep would be more attuned to the democratic transition that Myanmar aspires towards.
+1 416 515 9622 ext.227
Local columnist sued by Eleven Media
Friends of Mizzima 10:02 PM No comments
By Sean Gleeson | Frontier Myanmar
Journalist U Sithu Aung Myint has once again raised the ire of the Eleven Media Group and may face defamation proceedings under the Electronic Transactions Law, the tenth time the company has attempted to pursue charges against the prominent commentator.
Sithu Aung Myint -aregular columnist for Frontier and several other Yangon-based media outlets - has been named inacharge filed at the Pazundaung Township police station in relationarecent column published in former exile media outlet Mizzima.
According toapress release issued on June 22 by Mizzima, the column containedarebuttal to alleged misreporting of the activities of the now-defunct Myanmar Peace Centre, an organisation established by the previous government to assist in negotiations with the country's myriad non-state armed groups.
The column contained no explicit reference to either individual journalists or media companies.
Mizzima managing director U Soe Myint and editor U Myo Thant were also named in the complaint, which was filed by EMG chief reporter U Marn Thu Shein.
"This is not the only time Eleven sued me: I am facing four lawsuits, three in Pazundaung and one in Botahtaung Township," Sithu Aung Myint told Frontier on June 23. "I have never run or hidden from these cases, I am facing them and seeking solutions all the time."
Sithu Aung Myint facesamaximum sentence of five years' imprisonment under Section 34(d) of the Electronic Transaction of information "detrimental to the interests" or harmful to the dignity of an individual or organisation.
Mizzima's press release said that any complaint about the column should have firs been addressed through the adjudication functions of the Myanmar Press Council.
Eleven Media Group withdrew from the interim press council before the body was formally constituted last year, claiming that the previous government's decision to fund it to the tune of K50 million (US$42,400) left the body insufficiently independent from the government.
In 2013, Marn Thu Shein filedacomplaint against Sithu Aung Myint and the Yangon Times. His complaint alleged that an article that suggested an unnamed media outlet was intent on attacking the government "likeadog on someone's leg" wasaclear reference to his published criticisms of the size of Myanmar's foreign currency reserves.
According to the Myanmar Times, the complaint was dismissed by the Bahan Township Court, with the decision upheld by the Western District Court in March 2014.
Discussing previous legal action against the columnist, Eleven Media's online editor Nay Htun Naing told Frontier in March that his company was justified in pursuing defamation charges rather than retaliating in the pages of its own newspaper.
"When we filed the lawsuits, it's not because of his criticism," he said. "It's only because of the wrongful information that has been written about us. Because we don't really want to discuss these matters publicly, we file them in the court so it can be resolved peacefully and more discreetly."
Sann Oo contributed to this report.
Friends of Mizzima 2:09 AM No comments
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကားပါမစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက “လိုင်စင်စာအုပ်မှာ တံဆိပ်တုံး နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတံဆိပ်တုံးက ဘာလဲဆိုရင် ဒီကားကို ပိုင်ရှင်ကပဲစီးရမယ် လက်လွှဲလက်ပြောင်း မပြုရဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုး ဒီလိုရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်”လို့ လာရောက်ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် မတ် ၁ဝ ရက် မှာ နေပြည်တော်က ကညနရုံးချုပ်ကို မေးမြန်းတဲ့အခါ ငြိမ်းချမ်းရေး ပါမစ်ကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည် တွင်းအခွန်မှာ အခွန်ဆောင်လိုက်တာနဲ့ အခွန်ဆောင်လိုက်တဲ့ ဘယ်သူ့အမည်ကိုမဆို ပြောင်းလို့ရတယ်၊ ရုံးတွင်းအမိန့်စာလည်း ထွက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပြည်တွင်းအခွန်မှာ အခွန်ဆောင်လိုက်ရင် ဘယ်နှလက်ပဲပြောင်းပြောင်း ပြောင်းလို့ရတယ်၊ အမည်ကိုလည်း ကြိုက်သလောက်ပြောင်းလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပါမစ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ 9E/1000 ကျော်ကားတွေဟာ ကြိုက်သလို တရားဝင် လက်လွှဲလက်ပြောင်း လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားပါ ပြီ။
ဒီတော့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ပြောခဲ့တာနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဝန်ကြီးအနေနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောခဲ့သလဲ၊ မသိလို့လား၊ အခုကတော့ လွှတ်တော်ကို လိမ်ပြောသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ သမ္မတရဲ့ စကားတည်တံ့မှုက အရေးကြီးပါတယ်၊ သမ္မတက အရေးကြီးသလို သမ္မတရုံးဝန်ကြီးတွေရဲ့ ပြောစကားတွေကလည်း တည်တံ့မှန်ကန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ စကားက တည်တံ့မှုမရှိဘဲ လွဲမှားနေတယ်၊ အလွဲတွေ ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေရဲ့ မယုံမရဲမှုတွေ တိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လွှတ်တော်ကို လိမ်ပြောမိခဲ့သလားဆိုပြီး မေးမြန်းနေရတာပါ။
နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့ အချက်က ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့က ကားအစီးပေါင်း ၁၁၁ဝ စီးကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာမှာ ဝန်ကြီးတို့ ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်က အခွန်အရပ်ရပ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃ဝဝ နစ်နာသွားတဲ့ ကိစ္စပါ။
လွှတ်တော်မှာ ၀န်ကြီး ဒီလိုပြောခဲ့တယ်
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကားပါမစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းပြောခဲ့တဲ့ စကားအချို့က ဒီအတိုင်းပါ။
“ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို ကားပါမစ်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ အမိန့်စာထဲမှာလည်း ကားပါမစ်ပေးတယ်လို့လည်း မရေးပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ပေးတာက သူတို့စီးတဲ့ကားတွေကို Register လုပ်ပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ပုံ တင်ပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်”
“ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး တည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စဟာ ဥပဒေပြင်ပမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဥပဒေထဲကို ရောက်လာအောင် ကျွန်တော်တို့က ခေါ်ရတဲ့လူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ သူတို့ဥပဒေပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ ကားတွေကို ဥပဒေထဲရောက်အောင် မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုတင်ပေးတဲ့ အခါမှာလည်း အဖွဲ့ပေါင်း အားလုံးပေါင်း ၁၆ ဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၆ ဖွဲ့ဆိုတဲ့အတွက် အဲ့ဒီမှာ အရေအတွက် များပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီမှာအားလုံးပေါင်း လူကြီးစီးတဲ့ကားတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က တန်းပြီးတော့မှတ်ပုံတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးတဲ့ ကားတွေကိုတော့ အခွန် ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ပြီးမှ လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းဆောင်တာ ဆိုတာဟာ လုပ်ငန်းအသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အရင်တုန်းက Without လိုင်စင်ကားတွေကို လုပ်ပေးတဲ့ နည်းစနစ်အတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”
“အဲဒီတော့ ဒီကားတွေကိုလည်း နံပါတ်တွေကို ပေးတဲ့အခါမှာ ကညနကနေပြီးတော့ နံပါတ်ကို Grouping နဲ့ ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီပေးတဲ့ လိုင်စင်စာအုပ်မှာ တံဆိပ်တုံးနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတံဆိပ်တုံးက ဘာလဲဆိုရင် ဒီကားကို ပိုင်ရှင်ကပဲစီးရမယ် လက်လွှဲလက်ပြောင်းခြင်း မပြုရဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဒီလိုရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီကားတွေဟာ အပြင်မှာသွားရောင်းရင် ဈေးကောင်းမရပါဘူး။ အဲလို စနစ်တကျ လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကား Register လုပ်ပေးတယ် ဆိုတာကလည်း ကက်ဘိနက်ကို တင်ပြပြီးကာမှ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းရဲ့ သဘောအရ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မဟုတ်ကြောင်းလည်း ဒီလိုတင်ပြအပ်ပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ကြီး အလွဲတွေပြောမိတာလား လွဲပြီး ပြောမိလိုက်တာလား
ဝန်ကြီးပြောတာက ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ စီးနေတဲ့ကားတွေကို မှတ်ပုံတင်ပေးတယ်လို့ပြောတယ် ဒါဆို Rolls Royce Phantom တို့ Lamborghini တို့က တောထဲမှာ လက်ရှိစီးနေတဲ့ကားတွေလား မေးစရာ ရှိလာပါတယ်။
နောက် ဝန်ကြီးပြောတဲ့ လက်လွှဲလက်ပြောင်း မပြုရဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ တံဆိပ်တုံးကရော အခုဘာအဓိပ္ပာယ် ဖြစ်သွားပြီလဲ။
အခု လပိုင်းလေးမှာတင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှာပါတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်က ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ်နဲ့ အမည်ပေါက် အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး ဒေါ်လာသိန်းဂဏန်းကနေ သန်းဂဏန်းအထိတန်တဲ့ Lamborghini ကားကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဈေးနဲ့ စီးနေပါပြီဝန်ကြီး။
ဝန်ကြီးက လက်လွှဲလက်ပြောင်း မလုပ်ရဘူးလို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် အခု ကညနကတော့ ပြည်တွင်းအခွန်မှာ အခွန်ဆောင်ရင် အခွန်ဆောင်သူ အမည်နဲ့ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေးတယ်လို့ အမိန့်စာ ထုတ်လိုက်ပါပြီ။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ 9E\_1000 ကျော် ငြိမ်းချမ်းရေးပါမစ် ကားတွေကို နာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးစပြီး အမည်ပေါက် လုပ်တဲ့သူက ပြည်တွင်းအခွန်မှာ တစ်ပြားမှ အခွန်ပေးစရာမလိုပဲ ကညနမှာ အမည်ပေါက်ရပါတယ်။
အဲဒီ အမည်ပေါက်သူကနေမှ နောက်တစ်ယောက်ကို ရောင်းတဲ့အခါ နောက်ဆုံးဝယ်တဲ့သူက သူ့အမည်ပေါက်လိုချင်ရင် ပြည်တွင်းအခွန်ကိုသွားပြီး ကားတန်ဖိုးကို ရာဖြတ် ဖြတ်ရတယ်။ အဲ့ဒီရာဖြတ်တန်ဖိုးရဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကို အခွန်ပေးဆောင်လိုက်တာနဲ့ ကညနမှာ ကိုယ့်အမည်ပေါက် ပြန်ပြောင်းလို့ရပါပြီ။
ဥပမာ-ကျပ်သိန်း ၅ဝဝဝ ရဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်း သိန်း ၁၅ဝ အခွန်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်အမည်ပေါက်ရပြီ။
ပြည်တွင်းအခွန်မှာ ရာဖြတ်တယ်ဆိုလို့ အပြင်မှာ သိန်း ၅ဝဝဝ တန်တဲ့ကားကို သိန်း ၅ဝဝဝ အပြည့် ဘယ်သူမှ မဖြတ်ဘူး။ အဲ့ဒီထက် လျှော့ဖြတ်ကြတာချည်းပဲ။
အဲ့ဒီတော့ ကညနက ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် ကညန (ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန)က မှားတာလား၊ ဝန်ကြီးက လွှတ်တော်မှာ လွဲပြောမိခဲ့တာလားဆိုတာ မေးစရာ ဖြစ်လာတာပေါ့။
ပါမစ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဝန်ကြီးကပြောတယ်။ အခု တန်ဖိုးကြီးကားတွေက အကုန်လုံး နိုင်ငံတကာက ဝယ်သွင်းပြီး စီးတာဆိုတော့ သွင်းခွင့်ရှိတဲ့ ပါမစ်မဟုတ်လို့ ဘယ်လိုခွင့်ပြုချက်ကြီးများပါလဲ ဝန်ကြီး။ ပြီးတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း ပါမစ်တစ်စောင် အရင်ကျပ် သိန်း ၅ဝဝ ကနေ အခုဆို ကျပ်သိန်း ၂ဝဝဝ ဝန်းကျင် ပေါက်ဈေးနဲ့ ရောင်းဝယ်နေကြတာဖြစ်လို့ ပါမစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုခွင့်ပြုချက်များလဲ။
ဒါတွေ ခြုံကြည့်လိုက်ရင် ဝန်ကြီးအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ပြောတဲ့အခါ ဝန်ကြီးတို့ ချပေးလိုက်တာနဲ့မတူပဲ အပြင်မှာဖြစ်နေတာကိုမသိလို့ လွဲပြောလိုက်တာလား၊ ဒါမှ မဟုတ်သိသိနဲ့ လိမ်ပြောမိလိုက်တာလားလို့ ထင်မြင်စရာ ရှိနေပါတယ်။
၀န်ကြီးချပေးတဲ့ ကားတွေ ဘယ်သူစီး
ဝန်ကြီးပြောတာက ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကားတွေကို မှတ်ပုံတင်ပေးလိုက်တာလို့ ပြောခဲ့တယ်။
အခု ဒီကားတွေ ဘယ်သူတွေက အမည်ပေါက်နဲ့ စီးနေသလဲဆိုတော့ လွှတ်တော်အမတ်အချို့နဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအချို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ အရင်အစိုးရရော အခုအစိုးရ လက်ထက်မှာရော အခွင့်အရေးပေါင်း များစွာရနေတဲ့ ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တစ်စုပဲ စီးနင်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေဆီက ကားတွေကို မှတ်ပုံတင်ပေးတယ်လို့ ပြောပေမယ့် ရန်ကုန်လိုင်စင်နဲ့ချည်းပဲ ရန်ကုန်မှာ အများဆုံးစီးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးပြောခဲ့တာတွေနဲ့ အများကြီးကွဲလွဲနေတာ မျက်မြင်ပါပဲ။ တကယ်ဆို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအမည်နဲ့ပဲ ရှိရမယ့်ကားတွေ ဘာကြောင့် အပြင်လူအမည်တွေနဲ့ စီးနေကြသလဲ ဆိုတာကလည်း မေးစရာ ကောင်းနေပါတယ်။
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ဘယ်လိုရှင်းမလဲ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက အစီးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၁ဝ ချထားပေးခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီထဲမှာ အခွန်လုံးဝကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ ကားက အစီး ရေ ၃၇ဝ ရှိတယ်၊ ၃၇ဝ မှာ ၂၅၇ စီးက မှတ်ပုံတင်ပြီးပြီ၊ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းပဲ အခွန်ဆောင်ရတဲ့ကားက အစီးရေ ၇၄ဝ ချထားပေးတယ်၊ ၇၄ဝ မှာ ၅၂၃ စီး မှတ်ပုံတင်ပေးပြီးပြီလို့ပါ ထပ်ပြီးပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
လုံးဝအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ ပေးလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်ရေးပါမစ် (အရပ်အခေါ်) တွေကို သွင်းတဲ့အခါမှာ တန်ဖိုးနည်းကားတွေကို မသွင်းကြပါဘူး။ ပါမစ်ရှိတဲ့သူ အားလုံးနီးပါးက ဒေါ်လာ သိန်းဂဏန်းကနေ သန်းဂဏန်း အထိတန်တဲ့ တန်ဖိုးမြင့်ကားတွေကိုပဲ အားလုံးက တင်သွင်းစီးနင်း ရောင်းဝယ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်လာ ၅ဝဝဝဝဝ ဝန်းကျင် အထိတန်တဲ့ Rolls Royce Phantom၊ ဒေါ်လာ ၃ဝဝဝဝဝ ဝန်းကျင်တန်တဲ့ Bentley၊ ဒေါ်လာ သိန်းဂဏန်းမှ သန်းဂဏန်း အထိတန်တဲ့ Lamborghini လို ကားမျိုးတွေကို တင်သွင်းပြီး 9E/1000 ကျော်နံပါတ်တွေနဲ့ စီးနင်းရောင်းဝယ် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်လာ ၅ဝဝဝဝဝ ဝန်းကျင်အထိ တန်ဖိုးရှိတဲ့ Rolls Royce Phantom လိုကားကို အခွန်နဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်ကို အခွန်ငွေ ကျပ်သိန်း ၈ဝဝဝ ဝန်းကျင်အထိ ဆောင်ရမယ်။ အခု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့က အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ သွင်းခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် Rolls Royce တစ်စီးသွင်းတိုင်း ကျပ်သိန်း ၈ဝဝဝ နိုင်ငံတော်က နစ်နာသွားခဲ့တယ်။
ဒီလိုပဲ ဒေါ်လာ ၃ဝဝဝဝဝ ဝန်းကျင်တဲ့ Bentley ကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ သွင်းခွင့်ပေးတဲ့အတွက် Bentley တစ်စီးသွင်းတိုင်း နိုင်ငံ့အခွန်ငွေ ကျပ်သိန်း ၅ဝဝဝ ဝန်းကျင်အထိ နစ်နာခဲ့ရတယ်။
ဒီထက်ဆိုးတာက ဒေါ်လာသိန်းဂဏန်းကနေ သန်းဂဏန်းအထိတန်တဲ့ Lamborghini ကားကို အခွန်လွတ်နဲ့ သွင်းခွင့်ရသွားတဲ့အတွက် တစ်စီးသွင်းတိုင်း နိုင်ငံအနေနဲ့ အခွန်ငွေ အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၅ဝဝဝ နဲ့အထက် နိုင်ငံတော်က နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။
အခု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းပြောတဲ့ အစီးရေအတိုင်းဆိုရင် အစီး ၁၁၁ဝ အတွက် နိုင်ငံတော်ဟာ အခွန်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃ဝဝ နီးပါးအထိ နစ်နာသွားခဲ့ပြီ။
လုံးဝအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ အစီး ၃၇ဝ အတွက် တစ်စီးပျမ်းမျှ ကျပ်သိန်း ၄ဝဝဝ ကနေ ကျပ်သိန်း ၅ဝဝဝ ကြား နစ်နာတယ်ဆိုရင်တောင် အခွန်ငွေဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ဆို သန်း ၁၅ဝ ဝန်းကျင် ကနေ သန်း ၁၈၅ သန်းလောက်အထိ နစ်နာသွားတာပါ။
၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းအခွန်လွတ်နဲ့ အစီးရေ ၇၄ဝ အတွက် တစ်စီးပျမ်းမျှ ကျပ်သိန်း ၁ဝဝဝ ကနေ ၁၅ဝဝ ကြား နစ်နာတယ် ဆိုရင်တောင် နိုင်ငံတော်က အခွန်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆို ၇၄ သန်းနဲ့ ၁၁၁ သန်းအထိ နစ်နာမှာဖြစ်လို့ နှစ်ခုပေါင်းဆိုရင် နိုင်ငံဟာ အခွန်ငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃ဝဝ နီးပါးလောက်အထိ နစ်နာသွားမှာပါ။
ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ တကယ်စီးနေတဲ့ကားတွေကို မှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးလိုက်တာဆိုရင် အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် အခုဝန် ကြီးဦးအောင်မင်းတို့ ခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့ပါမစ်နဲ့ 9E/1000 ကျော် နံပါတ်တွေနဲ့ အမည်ပေါက်စီးနေတဲ့ သူတွေဟာ လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတချို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေက စီးနေကြတာပါ။
တစ်ဖက်က ပြန်စဉ်းစားရင် လွှတ်တော်အမတ်တချို့၊ ခရိုနီနဲ့ ဝန်ကြီးသားသမီးတွေ အခုလို အခွန်လွတ်နဲ့စီးဖို့ လုပ်ပေးသလို ဖြစ်မနေဘူးလားလို့ မေးစရာကောင်းပါတယ်။
လွှတ်တော်ကို လိမ်ပြောမိခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို လာရောက်ရှင်းလင်း ပြောကြားတဲ့နေရာမှာ လွဲပြောတာ မဟုတ်ဘူး၊ လိမ်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး၊ အမှန်အတိုင်း ပြောခဲ့တာဆိုရင် အခုလို အလွဲတွေကို ဘယ်လိုတာဝန်ယူ တာဝန်ခံ ဖြေရှင်းမလဲလို့ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ စကားကလွဲလို့ မရပါဘူး။ လိမ်ပြောမိတဲ့ သဘောလည်း သက်ရောက်နေလို့ မရပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် မဖြစ်မနေရှင်းလင်းတာ ပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံက အခွန်ငွေ ဒေါ်လာသန်း ၃ဝဝ ဝန်းကျင်အထိ နစ်နာခဲ့တာလေ။
ဝန်ကြီးအလွဲတွေ ပြောခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ဝန်ကြီးပြောတာ အမှန်ဆိုရင်တော့ လက်လွှဲလက်ပြောင်းလုပ်ပြီး အမည်ပေါက်နဲ့စီးနေတဲ့ ကားတွေကို အရေးယူရပါမယ်။ ဒီကားတွေကို ဘယ်ပါမစ်နဲ့ သွင်းသလဲ၊ ဝန်ကြီးတို့ထုတ်ပေးတဲ့ ပါမစ်နဲ့ဆိုရင် အဲ့ဒီပါမစ် ဘယ်သူ့ဆီကရသလဲ၊ ကြားပွဲစားက ဘယ်သူလဲ၊ အခွန်ဘယ်လောက် နစ်နာသွားသလဲ စသဖြင့် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရမှာပါ။
တိုင်းပြည်က နစ်နာသွားတဲ့ အခွန်အရပ်ရပ်အတွက် အဲ့ဒီကားတွေစီးနေတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်အချို့ရဲ့မိသားစုတွေ၊ လက်ရှိပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တချို့ရဲ့ မိသားစုတွေ၊ ခရိုနီတွေဆီကနေ အခွန်ပြန်ကောက်ပေးရမှာပါ။
အဲ့ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး ကားပါမစ်တွေကို လက်ဝယ်ကိုင်ထားပြီး ကားတင်သွင်း အရောင်းအဝယ် လုပ်နေတာတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်ရမှာပါပဲ။
ဒါက ဝန်ကြီးအလွဲတွေ ပြောခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုမှပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလို ပြန်လည်ဆောင်ရွက်မှု မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို ဝန်ကြီးက အလွဲတွေ ပြောခဲ့တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြမယ့်အပြင် အခုလို ကြားပွဲစားနဲ့ ဝယ်စီးကြတဲ့ လူတန်းစားတစ်စု သက်သာအောင် လက်ဝါးရိုက်ထားတယ်လို့ ထင်မြင်စရာ ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကားပါမစ်ပေးတဲ့အထိက ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီကားတွေကို ဝန်ကြီးပြောခဲ့သလို မဟုတ်ဘဲ နာမည်ပေါက်အထိ လုပ်လို့ရလာတာက အဓိကလွဲမှားမှုကြီးပါ။
နောက်တစ်ချက်က အတည်ပြုလို့ မရနိုင်သေးပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကားပါမစ်တွေဟာ အားလုံးငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေထံကို ရောက်တာမဟုတ်ပဲ ပြင်ပဈေးကွက်ထဲ ထုတ်ရောင်းတာတွေ ရှိတယ်လို့တောင် ပြောတာမျိုးရှိခဲ့တယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ မသေချာဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါကလည်း အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ် ရှိ မရှိ စုံစမ်းဖော်ထုတ် သင့်တာပါပဲ။
တကယ်လည်း ချုပ်လိုက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ကားပါမစ်ကိစ္စဟာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေလည်း ဘာမှမည်မည်ရရ မရခဲ့ဘူး၊ တိုင်းပြည်လည်း အခွန်နာ၊ တကယ်တော့ ကြားပွဲစားနဲ့ ဝယ်စီးနိုင်တဲ့ လူတန်းစားတစ်စုပဲ ကောင်းစားခဲ့တာပါ။
အခု ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း မယ်မယ်ရရမရ၊ တိုင်းပြည်လည်း အခွန်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃ဝဝ လောက် နစ်နာခဲ့တယ်၊ နောက် ချထားပေးခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့ ပြောခဲ့တာနဲ့ မြေပြင်မှာ ဖြစ်နေတာကလည်း အလွဲကြီး လွဲနေတာဖြစ်လို့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ကပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖွဲ့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ဆေးသင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်အဖြစ် ရှိနေပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ကြောင့် ဒေါ်လာသန်း ၃ဝဝ နစ်နာသွားတယ် ဆိုပေမယ့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းအပြင် အခြားသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေရဲ့ အခုလိုစီမံခန့်ခွဲမှု အမှားတွေကြောင့် အခြားကဏ္ဍတွေမှာပါ တိုင်းပြည်နစ်နာ ခဲ့ရပေါင်းလည်း များနေပါပြီ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ နောက်ကြောင်းပြန် မသက်ရောက်စေရဘူးလို့ ပြောထားတာက ၂ဝ၁ဝ အရှေ့ပိုင်းကို ပြောထားတာပါ။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အစိုးရသစ်လက်ထက် မပါ ပါဘူး။ ၂ဝ၁ဝ အရှေ့ပိုင်းလို့ ဆိုတာတောင်မှ ဥပဒေမဲ့လုပ်ခဲ့ရင် အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းအထိ ပြန်သက်ရောက်ပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဟာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အမှားတွေကြောင့် တိုင်းပြည်နစ်နာခဲ့တာ၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ နစ်နာခဲ့တာရှိရင် ဘယ်အစိုးရ လက်ထက်ရောက်ရောက် လုပ်ခဲ့တဲ့စီမံခဲ့တဲ့သူတွေကပဲ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံ ဖြေရှင်းကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တာဝန်ခံတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း အေးဆေးပါပဲလို့ မထင်ပါနဲ့။ ကိုယ့်စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားကြောင့် တစ်ချို့တိုင်းပြည် နစ်နာတာမျိုးအတွက် အဂတိမကင်းဘူးဆိုရင် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ၊ အခြားသော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ နစ်နာမှုမျိုးဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေ ကြောင်းအရပါ အရေးယူခံရနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ သမ္မတရဲ့ စကားတည်တံ့မှု၊ ကတိတည်မှုဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုပဲ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ စကားတည်တံ့မှု၊ မှန်ကန်မှုကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အခုအတိုင်းဆိုရင် ဝန်ကြီးက လွဲပြောမိခဲ့တာလား၊ လိမ်ပြောမိခဲ့တာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူတွေ မှားခဲ့တာလဲ။
မဇ္ဈိမမီဒီယာ တရားစွဲဆိုမှု ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ IPI တောင်းဆို
Friends of Mizzima 12:01 AM No comments
အင်တာနက်ဥပဒေကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ မဇ္ဈိမမီဒီယာက အယ်ဒီတာ၂ ဦးနဲ့ သတင်းစာဆရာ စည်သူအောင်မြင့်တို့အပေါ် တရားစွဲဆိုထားတာကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ သြစတြီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စာနယ်ဇင်းသိပ္ပံ IPI ဒီကနေ့ တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
မနှစ်က ဒီဇင်ဘာလက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စည်သူအောင်မြင့်ရေးသားတဲ့ "MPC သို့မဟုတ် မီဒီယာတစ်ချို့ရဲ့ ပုံဖျက်ခြင်း ခံရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း" ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းသုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြခဲ့မှုနဲ့ ပြိုင်ဖက်သတင်းဌာနတခုဖြစ်တဲ့ Eleven Media Group ကနေ ဆောင်းပါးရှင်နဲ့တကွ မဇ္ဈိမ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးစိုးမြင့်၊ မြန်မာပိုင်းတာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ ဦးမျိုးသန့်တို့ကို အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ဒီအမှုလက်ခံဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း IPI ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Friends of Mizzima 11:57 PM No comments
“According to international law, allegations of defamation should be treated asacivil matter between two individuals who have the right to sue one another inacivil court. Treating defamation asacriminal matter in which the State gets involved, as in this case, under the Electronic Transactions Law, is disproportionate inademocracy,” said ARTICLE 19.
“We urge the new government to stand behind their commitment to democratisation and drop State support for this case against Mizzima staff, and ask the plaintiff to consider initiatingacivil case instead.”
“Once inacivil court, according to international standards, the plaintiff must prove that Mizzima staff intentionally published knowingly untrue statements of fact, and provide evidence of measurable harm to Eleven Media Group.”
For more information on international standards relating to defamation, please see “Defining Defamation”.
Mizzima staff are being prosecuted under Article 34(d) of the Electronic Transactions Law (ETL), which states:
“Whoever commits any of the following acts shall, on conviction be punished with imprisonment foraterm which may extend to3years or withafine or both … (d) creating, modifying or altering of information or distributing of information created, modified or altered by electronic technology to be detrimental to the interest of or to lower the dignity of any organization or any person”.
The ETL falls significantly short of international standards as it includes no protection for freedom of expression, and instead has provisions that are both vague and unnecessary inademocracy.
For more information on comparing the ETL against international standards, please see “Background Paper on freedom of expression in Myanmar”.
မဇ္ဈိမကို အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းရန် IPI တိုက်တွန်း
Friends of Mizzima 11:37 PM No comments
အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကြောင့် အွန်လိုင်း မဇ္ဈိမ မီဒီယာ အား ပြိုင်ဖက်မီဒီယာတစ်ခုက အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုထားခြင်းသည် နောက်ပိုင်းတရားစီရင်ရေးများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် စီရင်ထုံးဖြစ်လာနိုင်ပြီး ချက်ချင်း အမှုပိတ်သင့်ကြောင်း နိုင်ငံတကာမီဒီယာအင်စတီကျု IPI က ပြောသည်။
မဇ္ဈိမ အွန်လိုင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းစာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်က ဖော်ပြခဲ့သည့် ဆောင်းပါးရှင် ဦးစည်သူအောင်မြင့်၏ “MPC သို့မဟုတ် မီဒီယာ တစ်ချို့ရဲ့ ပုံဖျက်ခြင်းခံရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း”ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးမာန်သူရှိန်က ပုဇွန်တောင်ရဲစခန်းတွင် တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းကို ရဲစခန်းမှ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၄(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ တရားစွဲဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဇွန် ၂၃ ရက်က အမှုကို တရားရုံးတင်ကာ ထိုနေ့တွင်ပင် အာမခံပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၄(ဃ)သည် အမှုစီရင်ချက်ချခံရပါက ဒဏ်ငွေ ကျပ်ငါးသန်းမှ ဆယ်သန်းနှင့် ဒဏ်ငွေမပေးဆောင်နိုင်ပါက ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ ကျခံရနိုင်သည့် ပုဒ်မဖြစ်သည်။
ယင်းအမှုသည် မြန်မာ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေသစ် ကို အသုံးမချဘဲ ရှောင်လွှဲရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် နောက်ထပ်ကြားနာမှုမလုပ်ခင် အစိုးရရှေ့နေများအနေဖြင့် အမှုကို ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း IPI မှ တရားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာ Steven M.Ellis က ပြောသည်။
“ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုစည်းကမ်းချက်ဆိုတာ နည်းပညာသစ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းတွေကို တားဆီးဖို့ ရည်ရွယ်ပြဌာန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်သက်တဲ့ ရေးသားပြောဆိုမှုတွေကို ပစ်မှတ်ထားတာမျိုး မဖြစ်ရပါဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
Friends of Mizzima 11:36 AM No comments
Friends of Mizzima 1:42 AM No comments
Pazundaung Township Magistrate Myint Kyaw gave bail to columnist Sithu Aung Myint, Mizzima Editor-in-Chief and Managing Director Soe Myint and Mizzima Editor-in-Charge of Myanmar edition Myo Thant on personal bond inacase filed by Eleven Media Group Chief Reporter Mann Thu Shein.
Chief Reporter Mann Thu Shein registeredacase against columnist Sithu Aung Myint at Pazundaung Police Station for his article ‘MPC or an organisation whose image distorted by some media’ which appeared in Mizzima online and in the digital newspaper edition on December 31, 2015. The columnist and editors were charged under Section 34(d) of the Electronic Communications Law and the court heard the case on June 23 where bail was given.
Eleven Media Group Chief Reporter Mann Thu Shein said: “We have filedacase against columnist Sithu Aung Myint in the past too. He wrote such articles many times and we could not lodgeacomplaint to any organisation so asalast resort we had toafile case against them with the police. We have no intention to cause them any grievance. We filed this case in defence of our media outlet and to remedy our grievances because he wrote articles based on wrong facts causing misunderstanding and [the reader to be] misled.”
Mizzima Media issuedapress release on June 22 in which it said the article “MPC or an organization whose image distorted by some media” written by columnist Sithu Aung Myint did not mention and refer to any media or any individual and did not mention the name of the complainant Mann Thu Shein so the allegations and case are baseless and should be withdrawn.
Mizzima Media Myanmar edition Editor-in-Charge Myo Thant said: “Charging us in the case under sections of the Electronic Communications Law which is not concerned with the Media is totally wrong inalegal sense and it is contrary to the provisions of the Media Law.”
Moreover, instead of settling this case through the Press Council by registering the case atapolice station it deprives Mizzima Media of its protection under the Media Law, he added.
“Charging us throughapolice station which has resulted inatrial has causedagrievance for Mizzima Media and all the accused in this case,” he went on.
The next hearing of the case is fixed for July 7.
အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
Friends of Mizzima 1:40 AM No comments
Friends of Mizzima 1:37 AM No comments
မဇ္ဈိမမီဒီယာကို တရားစွဲရန် ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Friends of Mizzima 5:53 PM No comments
Friends of Mizzima 5:51 PM No comments
Myanmar: News Media Council is the Place for Media...
Criminal case against IFEX member Mizzima News mus...